सुध्रने मति छैन अझै पनि
छ महिनासम्म निकै कसरत भयो । शारीरिक कसरत खासै भएन होला । किनभने पात्रहरुका पेट, अनुहार, अनि लवाइखवाई हेर्दा उनीहरुले कसरतका रुपमा टेबुलमा बसेर बार्गेनिङ मात्रै गरे । बार्गेनिङ गरे त केवल आफ्नो पार्टी र आसेपासेहरुका लागि । अरुका लागि भने केही पनि गर्न सकेनन् । गरेका छन्, केही काम भएका पनि छन् तर ती काम समयको माग हो । इच्छाका कारणले भने होइन ।
दलहरुलाई सहमतिको सरकार गठन गर्न दोस्रोपटक थपिएको ५ दिनको समय पनि पर्याप्त भएन । अब त शंका लागिसकेको छ कि, नेताहरु होटलमा, सिंहदरबारका विभिन्न कक्षमा वार्ता गरेर बस्छन् कि मस्तले तास खेलेर बस्छन् । होइन भने वार्ताको समय हिसाब गर्ने हो भने २४ घण्टामा २० घण्टा त वार्ता मात्रै भएजस्तो लाग्छ । तर निष्कर्ष भने केही आउने पनि होइन । समयको बर्बाद मात्रै ।
कहिलेकांही दलहरुले आफ्नो बैठकस्थलमा पत्रकारहरुलाई जान दिन्नन् । तिनै कुरा चुहिन्छन् भनेर नै होला कि । कुरा नखुल्दै तास खेलेको आरोप लगाइहाल्न नमिल्ला । तर सहमतिमा पुग्नु नै छैन भने किन वार्ता गरिरहने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसो त हतियार तेस्र्याएर लडाइँ गर्नु भन्दा अनि सडकमा जात्रा देखाउनुभन्दा त रिसोर्टमै भएपनि वार्ता गरेर समय कटाउनु उपयुक्त हो । कम्तीमा पर्यटन वर्षलाई असर त पर्दैन ।
दलहरु सहमतीय सरकार गठन गर्न फेरि पनि असफल भएका छन् । सहमतिको अन्तिम प्रयास लागि भन्दै काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा भेला भएका प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीच सहमति हुन सकेन । सहमतीय सरकारको संभावना समाप्तीसंगै अब बहुमतीय सरकारको प्रक्रियाका लागि ढोका खुलेको छ । तर बहुमतीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि दलहरुबीच कुरा मिल्ने आधार देखिन्न ।
सहमतियमा पनि नहुने अवस्थामा दलहरुले गणितमार्फत पनि समाधान गर्न सक्ने देखिएन । नेपालमा विज्ञ क्षेत्रमा गणित जान्ने धेरैजना छन् । तर यो गणितले संसदमा भने सरकार गठन गर्न नसकेर रुवाएको नै छ । ६ महिनासम्म त्यसै भयो भने अब पनि त्यसै भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । ३ पटकभन्दा निर्वाचनप्रक्रिया नजाने भन्ने छ, तर के भर तीन पटक होइन ३ को गुणा ३ बराबर ९ पटक नजाला भन्न सकिन्न । नियमावलीले के गर्ला र । - महेन्द्र ।
मन लागेको गरेर धमाका मच्चाउने चलन
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको अराजकता निम्त्याउने स्वतन्त्रता पक्कै पनि होइन । न त यो भनेको कसैको अधिकार हनन गरेर आउने कुरा हो । कुनै पनि सिर्जनात्मक कामको लागि स्वतन्त्रताको उपयोग भयो भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ । साथमा भएको बन्दुक चलाएर पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सकिन्न । यही भन्छन् धेरैजना ।
यो आदर्शको कुरा लाग्न सक्छ जहाँ साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएर मारेको अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चालक गोपाल तामाङलाई छोड्नुपर्ने माग गर्दै यातायात मजदुृरले अञ्चल/अञ्चलमा यातायातका साधन ठप्प पारेर सर्वसाधारणलाई दिन सास्ती दिन्छन् । यो सरासर अराजकता हो भन्ने पनि छन् । हो, सवारी दुर्घटना भयो, त्यसमा मृत्यु हुने र गाडीचालकलाई पनि सहानुभुति देखाउनुपर्छ ।
सहानुभुति र दयाका नाममा कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि अवरोध गर्ने नैतिक साहस पो कसरी आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । त्यस्तो साहस गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि किन पछि परेको छ प्रशासन बुझ्न झनै कठिन पनि छ । सो बन्दको कुरा गर्ने हो भने बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै इटहरीमा ६ वटा बस तोडफोड गरिएको छ । एक प्रकारको क्षतिका लागि गरिएको अर्को क्षतिबाट कस्ले के पाउने होला खै ।
पाँच वटा मजदुर सङ्गठनले बन्दको आयोजना गरेपनि ती सम्बद्ध शीर्ष दलहरुले के हेरेर बसेका हुन् अर्को कठिन समस्या बनेको छ । हो, सत्ता हातमा पार्नका लागि जुवा खेल्दै गरेपनि स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने काम गरेर समय काट्न दिन त नहुने हो नि उनीहरुको नेतृत्वले । न त स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई मतलब छ, न त केन्द्रकाहरुलाई टाउको दुखेको छ ।
वास्तवमा बन्द गर्नु पनि धमाका मच्चाउनु नै हो । यस्तो धमाका मच्चाएर केवल क्षति हुने भनेको नै सर्वसाधारणलाई हो । सर्वसाधारणले पनि कतिसम्म गर्नु । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई चड्कन लगाएर पनि नपुग्ने कतिसम्मको होला । दबाब र गाली त लगातार दिएकै छन् । गालामा झापड हानेर पनि नलाग्ने भएपनि अब भगवान भरोसा बाहेक के पो गर्नु उपयुक्त होला र । - महेन्द्र ।
शक्तिखोरको हर्ष केहीदिनमा सीमित नहोस्
काठमाण्डौंमा हुन्जेलसम्म तँतँ र मम गर्ने नेताहरु चितवनको शक्तिखोरमा पुगेर शिविरका माओवादी लडाकु र हतियार सेना समायोजन विशेष समिति मातहत आएको भनेर बडो खुशीका साथ समारोह गरे । दुवै पक्षका नेताका कुरा पत्याउने हो भने त नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सफलतातर्फ जानको लागि अब धेरै दिन बाँकी छैन । अर्थात केही समय धैर्य गरे पुग्छ भन्ने नेताहरुको भनाई रह्यो ।घोषणासँगै शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय लडाकुहरु विधिवतरुपमा विशेष समिति मातहतमा आएका छन् । माओवादी हतियार पनि तालावन्दी गरी शिविरमै राखिएको छ । २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति संझौता भएपछि शान्ति प्रक्रियामा भएको यो प्रगतिलाई अर्को महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ । तर यसले काठमाण्डौं आएपछि विवाद गर्ने विषय नबनोस् कामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।प्रधानमन्त्री माधव नेपालले त बडो हर्षका साथ माओवादी लडाकु अबदेखि राष्ट्रसेवकको एक अंगका रुपमा रहने बताए । आश्वासन र फुस्रो खालको खुशीका लागि प्रचण्ड पनि के कम, विशेष कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकार र माओवादीबीचको सहमतिले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम चरणतिर प्रवेश गराएको उल्लेख गरे, तर कहिले र कसरी भन्ने सूत्रपात हुन नसकेको अवस्था छ ।केही दिनअघिको गालाको चड्कनलाई अनि ६ महिना बढीको सरकारका लागि भएको हानाथापलाई सम्झने हो भने त यो सहमति एउटा प्रक्रियामात्र हो कि, सेना समायोजन हुने कसरी पो होला भन्ने देखिन्छ । शक्तिखोरमा बेलुन अनि राष्ट्रिय झण्डा उडाएर मात्र त भएन नि । उडाएरै हुने भए त पर्यटन वर्षका अवसरमा देशभर प्याराग्लाइडिङ र बेलुन कति उडाइए कति नि ।त्यसैले अब सांच्चै सेना समायोजनका लागि गम्भीर भएको हो भने काठमाण्डौं आएर नेताहरुले झगडा नगरीकन पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्प अपनाएरै भएपनि चाँडै सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ अनि संविधान बनाउने काममा रहेका बाधामा फटाफट निर्णय गर्नुपर्छ । संक्रमणकाल लम्ब्याएर जात्रा देखाउनु केवल भ्रष्ट्राचारी नेताहरुका लागि ठीक होला अरुका लागि घाटै हो । - महेन्द्र ।
जनताका कुरा गर्नु बेकारै भयो
January 20, 2011 7:47 am
चड्कनपछि के भन्लान् अब झलनाथले
देशको लागि निकै चिन्ता गर्ने नेता हुन् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल । त्यही भएर उनी एमालेको नेतृत्व तहसम्म पुगे । नेता त भइयो, तर सफल कि असफल भन्ने कुरा अर्कै पाटो हो । त्यही पाटोलाई उजागर गरेको एउटा पछिल्लो घटनाले । घटना दुव्र्यवहारको भनेपनि सभ्य भाषामा, आक्रोश भनेपनि भएको छ । त्यसमा शीर्ष नेताको पनि विवेक भएन भने उनीहरुको व्यवहारले सर्वसाधारण पनि रिसाउँछन् भन्ने चेत दिलाएको हुनुपर्छ ।सुनसरीमा एमाले अध्यक्ष भलनाथ खनालमाथि आफ्नै पूर्व कार्यकर्ताले हातपात गरेका छन् । कार्यक्रम चलिरहेको समयमा मञ्चमा नै देवीप्रसाद रेग्मीले हातपात गरेका हुन् । रेग्मीको थप्पडबाट खनालको चश्मा भूईमा खसेको थियो । त्यसबेलामा खनालले कस्तो संयमता देखाए वा देखाउने हुन्, ती कार्यकर्तालाई गरिने कारबाहीले देखाउनेछ । किनभने देशको गृहप्रशासन नै उनको हातमा छ । ती निमुखालाई उनले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् । तर के गर्ने हुन् पर्खनैपर्ला ।अब भने रिस देखाएर भन्दा पनि किन त्यस्तो आक्रोश खेप्नुपर्‍यो, त्यो पनि आफ्नै कार्यकर्ताबाट, त्यसलाई मनन् गर्न सक्नुपर्छ खनालले । खनालमाथि हातपात भएपछि कार्यक्रममा एक छिन भागदौड मच्चिएको थियो । चड्कन दिने कार्यकर्ताले नेताहरुबाट निराश भएरै हिर्काएको बताएपछि पनि के प्रमाणित हुन्छ भने पत्रकार र बौद्धिक वर्गमात्र होइन सर्वसाधारण बढी रिसाएका छन् नेताहरुदेखि ।अरु दलका नेतालाई ती कार्यकर्ताले हानेको भए त्यसको अर्थ अर्कै हुन्थ्यो होला । त्यसको परिणाम पनि खराब हुनसक्थ्यो । तर ती कार्यकर्ताले आफ्नै नेतालाई हानेर बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरेका छन् । तर यदि त्यो अरु हिंसात्मक भएको भए त्यो भने शीर्ष नेताहरुका लागि सुरक्षाको चिन्ताको विषय हुनसक्थ्यो । आखिर कुटाई खाए, त्यही भयो सबैजनाका लागि । यसलाई सस्तो प्रचारबाजीका रुपमा भन्दा पनि अलि गम्भीर किसिमले नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।सञ्चारमाध्यममा लेख, विज्ञका सुझाव नसुनेपनि त्यही दुःखाईलाई सम्झेर भएपनि अब एमालेले स्पष्ट बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्री लोभ गर्नेमध्ये झलनाथ खनाल पनि एक हुन् । उनले चाहिं कम्तीमा यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । आफुहरुले पनि चड्कन खान बेर नलाग्न सक्छ भनेर अरु शीर्ष नेताहरुले पनि डर मान्नुपर्छ । डर माने पो राम्रो काम हुनसक्छ । कसैको डर नमान्नेले राम्रो काम गर्न पनि सक्दैन । - महेन्द्र ।
सुधार भएन, बिगार र कारबाही मात्रै
सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकायमा सुधारको खाँचो हुनुपर्ने हो । कर्मचारी संयन्त्र अनि राज्यको विभिन्न निकायमा बसेकाहरुले भन्ने गर्छन् कि सुधार भनेको कुरा एकैचोटि हुने होइन, बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो । तर यही कुरालाई अब राजनीतिक दलका नेतृत्वले पनि संसद र दलहरुको अधिकार प्रयोग गरेर दादागिरी देखाउन थालेका छन् ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि महाअभियोग लगाउने बारेमा तयार पारिएको प्रस्ताव संसदमा लगिने भएको छ । एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा खराव आचरण गरेको ठहरसहित न्यायपरिषदले बममाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तीन दलको निर्णयपछि अब बममाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित भएको छ ।भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा भएको यो गल्तीलाई क्यास गरेर कारबाही गर्ने त होलान् । तर न्यायपालिका र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा सुधारको प्रयास नगर्न अल्छी गर्ने पक्का छ । किनभने एउटा काम गरेभने अरु कुरा ओझेलमा परे पनि फरक पर्दैन भन्ने मान्यतालाई दलहरुले सजिलै आत्मसात गर्ने गरेका छन् । त्यसको उदाहरणका रुपमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई लम्क्याएर सत्ताको चास्नी चाखिरहने दाउलाई पनि लिन सकिन्छ ।हो, न्यायपालिकामा संलग्न जोसुकैलाई पर्याप्त प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न दलहरुले देखाएको अग्रसरता सही नै हो । तर त्यही नाममा उनीहरुले गर्नुपर्ने अन्इ कामलाई ओझेलमा पारेजस्तो गरेर पन्छिन भने मिल्दैन । अब संविधान निर्माणका माध्यमबाट राज्यका यावत समस्याको समाधानमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुको साटो दलहरुको न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न जोरका तोर भएर लाग्छन् । यो समयको ख्याल नगरेको हो ।भन्छन्, भत्काउन गाह्रो छैन, तर बनाउन गाह्रो छ । अहिले कारबाही गर्न सहज मानिएको छ । कम्तीमा भएका कानुनअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो, तर त्यही भन्दैमा अरु कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । जताबाट हेरेपनि महत्वपूर्ण भनेको चाहेको कामकारबाही वा गर्न खोजिएको काम सफलतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने नै आवश्यकता हो । - महेन्द्र ।
धक्का दिने राजनीति आफ्नैमा लागु भएपछि
माओवादी जनयुद्धमा रहेको बेलामा धक्का दिने भन्ने शब्दावली निकै चलेको हो । माओवादीहरुले धेरै प्रयोग गरेपनि छापामाध्यम र अन्य सञ्चारमाध्यम हुँदै यो शब्दावलीको प्रयोगले पनि बिस्तारै व्यापकता पाउँदै गयो । यतिमात्र होइन, शब्दावलीको प्रयोगमा माओवादी राजनीतिकर्मी अगाडि नै छन् । भन्नेहरुले भन्छन्, यसरी भाषामा प्रयोग गरिने नौलोपनले एक खालको जोश पनि ल्याउँछ रे ।
त्यही जोश कहिलेकांही गलत प्रयोग भयो भने त्यसको परिणाम नराम्रा भएका उदाहरण थुप्रै नै छन् । यस्तै भएको छ, माओवादीको जोश निकाल्न गरिउको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने घोषणा गर्ने बेलामा बाबुरामकालाई नदिने प्रचण्डका भएजतिलाई दिने त भनिएको थिएन । तर माओवादीमा प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टराई लाई नै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न रोकेका छन् ।
सम्बोधन नै गर्न रोकेपछि बाबुरामपक्ष पनि के कम । कार्यक्रम स्थलमा पुगेर पनि फर्किए भट्टराई र उनका समर्थकहरु । पार्टीमा रहेको विवादलाई सामसुम पर्नका लागि भनेर अनेक उपायको अवलम्बन नै गरेर भएपनि लुकाउन खोजिएको थियो । तर भाषण गर्ने ठाउँमा नेतामाथि धक्काधक्की, त्यो पनि महिलामाथि पुरुष नेताको दुव्र्यवहार भएपछि कुरा लुक्ने भन्ने त रहेन अब ।
त्यसक्रममा प्रचण्डले पनि त्यो दृश्य हेर्नेबाहेक अरु केही गर्न सकेनन् । जुन अझ फरक खालको रहन गएको छ । खासगरी कुरा गराईलाई ध्यान दिने हो भने पनि । पार्टीमा आन्तरिक जनवादको माग गर्दै मञ्चमा पुगेकी हिसिलालाई माओवादीको नेवाः राज्य समितिका ईन्चार्ज हितमान शाक्यले धकेलेर तल झारेका थिए । गणतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई त बोल्न मनाही छ भने अरुलाई केको कुरा ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले भने पूंजीपति, दलाल, नोकरशाह विरुद्ध आन्दोलन शुरु गर्ने उदघोष गर्न पछि पर्दैनन् । यदि त्यसो गर्ने नै हो भने त्यो के का लागि र कस्का लागि । एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाले सोचाइ राख्ने क्षमता छैन भने कस्का लागि लड्ने भन्ने प्रश्न ठाडै रहेको छ । यदि कारबाहीको कुरा हो भने त्यसलाई लागु गर्नुपर्‍यो, अर्थात कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न सक्नुपर्छ । होइन भने चुपचाप पाखुरीका पावर देखाउनाले त कुरो झनै बिग्रने पो होला नि ।
अब कुरा आउँछ, महिला अधिकारको वकालत गर्ने ठुलो पार्टीभित्रै यस्तो हुन्छ भने त्यो पनि शीर्ष तहको नेतालाई, कस्ले कस्का लागि के सम्मान गर्छ वा विधिअनुसार चल्छ र खै । यसलाई पनि राष्ट्रिय मान र सोचाईमा आधारित रहेर सोच्ने हो भने उत्तर आउन गाह्रै पर्ला । - महेन्द्र ।
बरफ फुटेपनि जम्ने हो कि होइन ?
बरफ पग्लनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यही घोषणा गरेका छन् कि बरफ पग्लेको छ, खासगरी अनमिन गएपछिको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार्ने मामिलामा । तर कसरी भन्ने प्रश्न सधैं नै रहिरहेको छ । किनभने अनमिनले गर्दै खाएको रेखदेखको काम विशेष समितिलाई दिने त भनिएको छ, तर कसरी भन्ने प्रश्न भने अल्झीएको छ ।
विशेष समितिलाई दिने भनिएपनि त्यसका मापदण्डका विषयमा दलहरुबीच सहमति बनेजस्तो देखिएपनि यो एक हिसाबले भन्ने हो भने हतारमा नगरी नहुने सहमतिका रुपमा लिंदा खासै फरक नपर्ला किनभने, अनमिन जाने नै भएपनि केही न केही त हुनैपर्‍यो, त्यही नै भएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । वास्तवमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यही कुराहरुमा विश्वास नलागेर नै भनेको हुनुपर्छ कि दलहरुबीच भएको सहमतिको विवरण चाहिन्छ भनेर ।
वास्तवमा प्रचण्डले भनेझैं बरफ फुटेको छ । तर यो नपग्लीने हो भने यो फेरि पनि जम्छ । जम्ने र पग्लीने प्रक्रिया लामो भएपनि यसले पल्लीएको पन कति समयसम्म जारी राख्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अब यसलाई नेपालमा हिमाल पग्लने क्रमसँग पनि जोड्न खोजिएको हो भने त नेताहरु अब प्रकृतिप्रेमी पनि हुन थालेछन् भन्न मिल्थ्यो होला तर, के हो भन्नै गाह्रो छ ।
कम्तीमा फुटेको बरफलाई शान्तिप्रक्रियाको लागि भन्दै राष्ट्रपति निवासमा भोज खाएर भएपनि दलहरुले फुटेको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउने प्रयास गरेका छन् । धेरै उपलब्धि नभइरहेको अवस्थामा यसलाई पनि एउटा सकारात्मक कदमको रुपमा लिंदा नै उपयुक्त होला । होइन भने त दलका नेताहरु काम नगर्ने अनि वार्ता र बैठकमा मात्रै रुमल्लीने भएकोले गाली मात्रै खाने हुन् कि भन्ने डर ।
आखिर बिग्रेका कुरालाई सपार्ने पनि यिनै नेता नै हुन् कि । उनीहरुलाई बाइपास गरेर युवा मात्रै आउने हो भने पनि उनीहरुले पनि कता लैजाने हुन् कि भन्ने चिन्ता होइन भने आत्तिइहालेर जानु पनि घातक हुने हो कि भन्ने पनि डर । तर त्यो डर पनि नहुनु पर्ने हो, जापानमा जस्तै ज्येष्ठ नागरिक धेरै भएको मुलुक परेन नेपाल । जेजस्तो अवस्थामा भएपनि नेपालमै युवाहरु धेरै छन्, आखिर उपयुक्त मौका त आउनैपर्ने हो नि । तर कहिले ? प्रश्नको जवाफ पाउन सजिलो छैन । - महेन्द्र ।
जनताले पर्खेपनि सबैले पर्खन्नन्
जति ढिला गरेपनि पर्खन्छन् जनताले भन्ने भ्रमका कारण धेरै सत्ताहरु ढलेका उदाहरण छन् । अझ मानव सभ्यताको कुरा सम्झने हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरुको चरित्र इजिप्टमा 'कुनै वस्तुले काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई मोड्ने प्रयास गर्न हुन्न' भन्ने भनाईसँग मिल्छ । त्यही कुरालाई अनुसरण गरेकै कारण इजिप्टेलीहरु विकासमा पछि परे भन्ने भनाई पनि छ । नेपाल इजिप्ट त कहिले बन्ला र, तैपनि कुरा भने त्यस्तै त्यस्तै हो ।
२०६३ साल, साउन २४ गते स्थापना गरिएको अन्मिनले ६ महिनाभित्र लडाकु व्यवस्थापन र समायोजनको जिम्मेवारी पाएको भएपनि अन्मिनको म्याद सातपटक थपिएको भएपनि उक्त काम भएन । अझै पनि दलहरु अनमिनलाई राख्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायमा थिए । तर के गर्नु राष्ट्रसंघ चलाउनेहरु अलि बुद्धि भएका मानिस हुन् भन्ने बुझेनन् नेताहरुले । त्यही भएर जति हारगुहार गरेपनि अन्तिमपटक भनेर थपिएको अनमिनको म्याद फेरि थपिएन ।
यस मामिलामा नेताहरुले जे कुरा गरेपनि भित्रभित्र हारेकै महसुस गरेको हुनुपर्छ । होइन भने अनमिनबिना आकाश नै खस्छ कि भनेझैं गर्नेहरु अहिले आएर केही पनि हुन्न भनेर पानीमाथि ओभानो हुन खोजिरहेका छन् । उदाहरणका लागि माओवादी नेता सी पी गजुरेलले अनमिनको बहिर्गमनले शान्ति प्रक्रिया नभाँडिने बताएकोलाई लिन सकिन्छ । यदि दलहरुबीच नै सहमति नगरी नहुने छ भन्ने थाहा छ नै भने किन अनमिनको म्याद थपेर दलहरु आन्तरिक रुपमा कमजोर छन् भन्न देखाउन खोजिएको थियो यसअघि, यो कसैले पनि नबुझेको कुरा हो । कसैले बुझेको हो भन्न खोज्छ भने त्यो बेइमानी नै हो ।
कम्तीमा पटकपटक म्याद थपेर आलटाल गरेर सरकारी कर्मचारीले जनतालाई सुताउने, नेताहरुले सचेत नागरिक अनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई थाङनामा सुताउने दिन गए भन्ने कुरा नेताहरुले बुझ्नुपर्छ । होइन भने नेताहरु पनि जहाँको त्यहीं, देश नै जहाँको त्यहीं नरहला भन्न सकिन्न । अझै, अब जनताहरुले पनि पर्खन्नन् भन्ने कुरालाई पनि नबुझ्ने हो भने सडकदेखि संसदमा नेतृत्व तहको गाली बेइज्जती बाहेक के नै होला र ।
अब अनमिनले प्रयोग गर्दै आइरहेका सामग्री माग्न बडो लालची पारा देखाएका छन् सरकारी अधिकारीहरुले । कम्तीमा लत्ता कपडाजस्ता सामग्री मागेर देशको बेइज्जत त गर्न भएन नि । औंलो दिंदा डुँडिल्नो निल्नु त भएन नि । त्यही कुरा बुझेर आगामी दिनमा गोली हानाहान हुंदा पनि आएनन् भने कस्ले जिम्मेवारी लिने खै । त्यही मागेको सामग्रीमध्येबाट कति फाइदा आफै लिने भन्ने सोच हुँदो हो नेताहरुको, जालमा नपर्लान् भन्न सकिन्न । - महेन्द्र ।
जुवाजस्तै बनेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रक्रिया
कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने हो भने अहिलेका त्यस क्षेत्रका बासिन्दा रिसाउँछन् । हुन पनि त्यो जात्राको महत्व आफ्नै भएपनि त्यसलाई दुरुपयोग गरेर जात्रालाई व्यंग्यका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउने गरिएको छ । सांस्कृतिक चालचलन र यसमा आपत्ति जनाउने यो प्रक्रियाबारे आफ्नै कथा व्यथा होलान् । तर यो भनाईलाई मात्रै सापटी लिने हो भने भर्खरै सकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रक्रिया सो भनाईसँग मेल खाने देखिन्छ ।
अझ भन्ने हो बाँदरको हातमा नरिवल पनि भएको छ । त्यस्तै यो ६ महिनाको समय लौरो न हतियार भएको छ । त्यसलाई यो प्रक्रियालाई जति पनि नकारात्मक उखान र टुक्का छन्, तिनकै उपमा दिएपनि फरक पर्दैन । के गर्नु काम नै त्यस्तै छ त, त्यसबारेमा चुप लागेर बस्नुको के नै अर्थ भयो र ।
भन्छन् नि, बुद्धि भएकाहरु चुप मात्रै लागेर बसे भने त्यो जत्तिको घाटा केही पनि हुन्न, राज्यमा भएको ताण्डव नृत्यका विषयमा । अहिले यही नै भएको त होइन होला । तर पनि संसदमा भूमिका खेल्ने दलहरु भने नांगिएका छन् । के को अभ्यास यो, ६ महिनाको अवधिमा । प्रश्न गर्न थालिएका छन्, आर्थिक घोटाला ? नातावाद, कृपावाद ? के त, पैसा खाएर सरकारी अधिकारीहरुको सरुवा अनि बढुवा ?
यस्तै प्रश्नैप्रश्नले भरिएको यो प्रक्रियाको केवल अन्त्य मात्रै भएको हो । तर सहमतिका लागि भन्दै अर्को लडाइँ त बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एकमात्र उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी रहेको अवस्थामा केही भएको त छ भन्न मिल्थ्यो । अब भने मियो बिनाको दाइँ भनेझैं सहमतिका नाममा अनेक लम्बेतान खेल भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने यसैका लागि नै हालसम्मका कसरत भएका थिए । वास्तवमा थाहै नपाइकनै, के हुन्छ भनेर ।
समयको बर्बादी, राजनीतिक दलहरुबीच अनावश्यक हानथाप र तानातान यो अवधिमा भए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि भनेर सांसद किनबेचको कुरा यही बेलामा आयो । शान्तिप्रक्रियामै असर पर्नेगरी राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय बेइज्जती यही समयमा भयो । गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मै नाम दर्ता गराउनेगरी यही समयमा देश सरकारविहिन भयो । अब यस्तो परिस्थितिलाई जुवाको हारेको खाल भन्दा राम्रो कसरी भन्ने खै । भन्नै सकिन्न त्यसरी । यसको जिम्मेवारी शीर्ष तीन नेताहरुले लिएर अब सन्यासको घोषणा गरेहुन्छ । किन अझै अनिर्णयको बन्दी बनाउने ? अझ प्रचण्डले त तातो प्रतिक्रिया दिएका छन्, आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व लिने भनेर । नाटक मात्रै । - महेन्द्र ।
अन्तरराष्ट्रिय हस्तक्षेप खोज्न टाढा जानै परेन
भारतमा नेपालको समस्याबारे गहन छलफल भइरहेको छ । कति गहन भन्ने कुरा चाहिं नेपालमा पर्ने त्यसको असरपछि नै भन्न सकिएला । हुनपनि भारत परस्त भनिएका माओवादीका बाबुराम भट्टराई काँग्रेसका सुजाता र प्रदीप गिरि अनि एमालेका केपी ओली नै एक गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन भन्दै भारत जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अझ सो सम्मेलनका लागि गएको भनिएपनि नेताहरुले त्यहाँका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुसँग छलफल समेत गरेका छन् ।
हो, नेपालजस्तो आर्थिक र भौगोलिक तथा शक्तिको हिसाबले सानो देशमा भारतको प्रभावलाई निमिट्यान्न पार्ने सम्भावनाका कुरालाई त्यति धेरै एकतर्फी रुपमा हेर्न नसकिएला । तर भारतीय नेताहरुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तहल्का आउनेगरी भेटघाट गर्ने वातावरण बनाउनु आफैंमा नकारात्मक त होइन भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ । किनभने भारतमा छलफल भइरहेको छ, त्यो भन्दा बढी नेपालमा आशंका भइरहेको छ ।
माओवादीमा बाबुरामको उछितो काढ्ने शंका बढेको छ । एमालेमा ओलीकै उछितो हुने होला भने काँग्रेसमा त सहमति नै होला । तर भारतको प्रभावको विपक्षमा बोल्ने पनि छन् । तर विदेशी हस्तक्षेपको गफ हाँक्ने दलहरुले यो अवसरलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा अर्थात स्वदेशमा सरकारको नेतृत्व हातमा पार्न बल नखेलुन् भन्ने नै सदिक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता छ । होइन भने उनीहरुलाई कसरी नेता मान्न सकिएला र ।
भारतमा त्यो छलफल चलिरहेका बेलामा बेलायत र अमेरिकालाई खपिनसक्नु भएको छ । बेलायती राजदूत जोन टकनटले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर अनमिनको फिर्तिपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको भविष्यबारे छलफल गरेको भनिएपनि भारतको चासोप्रति अप्रत्यक्ष रुपमा असन्तुष्टि हो कि भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यस्तै, अमेरीकी राजदुत स्कट एच डेलीसीले काँग्रेस नेता एंव प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलसंग भेटी अनमिनको फर्तापछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे गरेका छन् ।
यो बाहेक न्युयोर्कमा पनि उस्तै राजनीति छ नेपालका बारेमा । नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अन्मिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया असफल हुने खतरा देखाउँदै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी छन् । यो पृथ्वीका अनेक गोलार्द्धमा भयको सिर्जना गर्न खोजेर नेपाललाई नै बिचरा बनाइएको आशंका गर्ने प्रशस्त प्रमाण भेटिन थालेका छन् पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त ।
अब भन्नुपर्छ, यो अन्तरराष्ट्रिय समुदायको नाचगानलाई हस्तक्षेप भन्ने कि, स्वभाविक चासो भन्ने कि, सहयोग भन्ने कि, माया गरेको भन्ने कि, घृणा गरेको भन्ने कि, के भन्ने हो ? - महेन्द्र ।
दलहरुको अधिनायकवादी अनुहार
आफुलाई मन नपर्ने विषयमा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धति हो भनेर नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले नै सिकाएको कुरा हो । तर त्यही मान्यताविपरित दलहरुले गतिविधि गर्न पनि पछि परेका छैनन् । यस्ता काममा संलग्न हुन सिकाउने अरु कोही नभएर संसदमा रहेकामध्ये शीर्ष दलहरु नै बढी जिम्मेवार छन् । उनीहरुले नै साना दलहरुलाई नराम्रो संस्कृति सिकाएका छन् ।
नराम्रो संस्कृतिको दायरा धेरै ठुलो हुनसक्छ । भ्रष्ट्राचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नखोज्ने, आफ्नै पार्टीभित्र हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउने तरिकालाई पनि नराम्रो संस्कृतिको रुपमा लिन सकिन्छ । दलहरुले सत्तामा मात्रै जान खोज्ने, संविधान निर्माण भट्याएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ध्यान नदिने पनि विशेषताभित्र पर्न गएको छ । तर यो भन्दा पनि अहिले दलहरुबीच आफैभित्र लडाइँ छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा दलका नेता कार्यकर्ता आफैं सजग हुनुपर्नेमा अरु दलका कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । संघीयताको विरोधमा देशब्यापी अभियानमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रम मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले विथोलेका छन् । नाराबाजी गर्दै गएका फोरमका कार्यकर्ता जनमोर्चाको कार्यक्रममा मञ्च समेत तोडफोड छन् ।
यो सबै बाँदरको चाला भयो । किनभने आफुहरु मिल्न नसकेको दोष अरु ठुला दलहरुलाई दिइरहेका छन् मधेशवादी दलहरु । मधेशवादी दलहरु भटाभट फुटिरहेका छन्, तर दोष भने एमाले लगायतका दलहरुलाई दिएका छन् । संघीयताको बारेमा मधेशवादी दलहरुको आफ्नै धारणा छ, त्यसबारेमा संविधानमा व्यवस्था भएको छ, नयाँ संविधानमा संघीयता बारेमा पनि अधिकांश दलहरु सहमत छन् । एउटा दलले विरोध गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई दबाउन खोज्नु बुद्धिमानी काम होइन ।
घटनामा जनमोर्चा निकटको रक्तिम साँस्कृतिक परिवारका सांगीतिक सामग्री समेत तोडफोड गरेका छन् जसबाट रक्तिम परिवारको ठूलै नोक्सानी समेत भएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छु भन्ने दलहरुले आफुले नै त्यसको अभ्यास गरे पो पत्याउनु, होइन भने झुट नै हो कि भन्न बाध्य हुनुपर्नेछ सर्वसाधारण । - महेन्द्र । तस्वीरमा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ।
फुटेको हेर्नेबाहेक गतिलो नियति रहेनछ
मधेशवादी राजनीति गर्ने भनेर एकीकृत भएका नेताहरु अहिले भटाभट फुटेर बिजोग निम्त्याउने तरखरमा लागेका छन् । घटनाक्रमले यही बताइरहेको छ । किनभने फोरम करीब आधा दर्जन पटक फुटेको घटनाले त्राहिमाम बनाएको अवस्था सेलाउन नपाउँदै मधेशको अर्को दल फुटेर टुक्रेमा परिणत भएको छ । एकताको महत्व नबुझ्दा गल्ती भएको महसुस नगरेको परिणाम नै यही हो ।
हो, निश्चित नेतालाई सत्ताको चास्नी चाख्न मन लागेपछि उनीहरुको र्‍याल रोक्न कसैको हिम्मत भएन । वास्तवमा स्वार्थ र धोकालाई रोक्ने औषधि आफैं उत्पादन भएन भने साथीभाइले, सहकर्मीले मात्र भनेर पुरा नहुने रहेछ । त्यही प्रमाणित गरिदिएका छन् । मधेशवादी दलका नेताहरुले अहिले ।
अरु केही नगरेपनि उनीहरु फुटेका छन् । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा विभाजित भएको छ । सरकारका दुई मन्त्रसिहित तमलोपाका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले नयाँ दल तमलोपा नेपालको घोषणा गरेका छन् । तमलोपका महामन्त्रीसमेत रहेका उद्योग मन्त्री महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा ९ सभासदसहितको नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । मन्त्री नै रहेको दल फुटेको छ ।
वास्तवमा सत्ताका लागि यसरी फुटेको भन्ने बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । किनभने यसअघि पनि मन्त्री नै भएकाले आफ्नो संस्थापन पक्षलाई तिलाञ्जली दिएका थिए । बरु आफुले आफैलाई बढी जानेको हुन्छ भनेझैं तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बृजेशकुमार गुप्ताले सत्ताको खेलका कारण पार्टी फुटेको बताएका छन् । उनले सत्ताका कारण पार्टी फुटेको बताएपनि आफ्नो कुरा भने बताउन सकेनन् ।
आफ्नो पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धति कति छ भनेर । शीर्ष नेताहरु भन्दैमा मनलागी गर्न थालेपछि लोकतान्त्रिक युगका नेता कार्यकर्ताले कति सहेर बसिरहनु नि । त्यही भएर पो पार्टी फुटेको हो कि, यसतर्फ भने ध्यानै गएन नेताजीहरुको आरोप लगाइदिए पुग्यो । सत्ताकै कारण पार्टी फुटेको हो भने त्यस्तो वातावरण कस्ले निम्त्यायो त्यो पनि भनिदिएको भए जाति नै हुन्थ्यो कि ।
अब जहाँसम्म विचारको कुरो छ, सिद्धान्त भएर के नै गरेका छन् र दलहरुले । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेको भए सधैंभरी गरिब भएर बस्नुपर्ने थिए । सिद्धान्त पनि सीमित हुन्छ, करीब सयओटा दल छन्, ती सबैले सिद्धान्तको नाममा भडकिलो कुरा गर्नु बेकार छ । - महेन्द्र ।
संसद अधिवेशनबारे दलका नेताहरुको नाटक
संसदबाट के के न गर्ने भनेर लागेका थिए दलका नेताहरु । बिचरा डेढ दर्जनजति संसदका निर्वाचनले पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकेनन् । त्यसपछि सहमति र असहमतिका कुरा धेरे गरेका नेताहरुले । के गर्नु, दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व पनि मनाए, के के गरे के के । तर पनि सूत्र पत्ता लाग्न सकेन । वास्तवमा यो सूत्र के होला भन्नेम अझै निक्र्योल छैन ।
होइन भने यो विशेष अधिवेशन डाक्ने कसरत पनि निकै लामो भयो । काँग्रेस एमालेसँग निकै रिस उठेको झोंकमा माओवादीले विशेष अधिवेशनबाट भएपनि पेलेरै जाने बताएपछि साना ठुला दलहरुको चुरीफुरी पनि बढ्यो, वार्ता पनि भए, निश्चित संख्या पुर्‍याएर समावेदन गर्ने काम पनि भयो, सबै भयो । निकै कसरत भयो, त्यसका लागि अंकगणितका लागि निकै दिमागको पनि प्रयोग भएको थियो होला ।
तर यत्रो कसरत त्यत्तिकै खेर गयो । माओवादीले आफ्नो संख्या जुटाउन गरेको कसरत मात्र होइन, काँग्रेस एमालेले माओवादीलाई हराउन गरेको कसरत पनि कम्ती रोचक छैन । एमालेमा विवाद नै भएपनि जसरी तसरी माओवादी प्रस्तावलाई असफल बनाउन त सहमति बन्यो त्यसअनुसार काँग्रेससँग कुरा पनि मिल्यो । यसले एमालेमा अर्को चरणको विवादको तहल्का ल्याइदियो भने बाहिर हात लाग्यो शुन्य अर्थात अहिले आएर भने अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
आखिर यो अर्थहीन प्रयास र कसरतले फाइदा के भयो त । फाइदा त केवल मतभेद बढाउने मात्रै भयो । त्यो पनि लोकतन्त्रवादी दलहरु विरुद्ध लाग्नेहरुका लागि भएहोला । यसको लेखाजोखा सम्बन्धित दलहरुले नै आफैं गर्ने होलान् । तर निरर्थक कसरत र प्रयास मात्रै गरेर किन समय खेर फालिंदैछ । यसको जवाफ कसरी दिने ?
सहमति छलफल मात्रै भनेर झुलाउन खोजिएको हो वा, समय मात्रै कटाउन थालिएको हो, यसको जवाफ आउनु जरुरी छ । होइन भने संसद सञ्चालनसम्बन्धी खर्च, संविधान निर्माण समयमै हुने आशंकाका बीचमा यस्तो शंकास्पद परिस्थिति निर्माण हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय बनेको छ । त्यसैले संसदमा र काठमाण्डौंमा मञ्चन गरिएको नाटक नै भन्दा धेरै फरक नपर्ला । - महेन्द्र ।
आफ्नै परिवारको पत्तो छैन, देशको कुरा
मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशका मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजानका लागि भनेर मधेशमा कहिल्यै नभएको आन्दोलन चलायो । त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप मधेशबाट पहाडीहरु भाग्न बाध्य भए कतिपय अवस्थामा । साँच्चै भन्ने हो भने मधेश आन्दोलनले जति धेरै मधेशका समस्यालाई उजागर गर्‍यो, उल्लेख्य संख्यामा सदभाव पनि खैलाबैला बनायो । त्यसको परिणाम दीर्घकालीन रुपमै नरहला र ।
हो, त्यही ताका उदाएको हो गैससको रुपमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम । तर के गर्नु नयाँ संविधान निर्माणले सीधा बाटो पक्रन नसक्दै त्यही फोरम चार चार पटक फुटको शिकार बन्नपुग्यो । पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरमलाई उनकै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका संजयकुमार साह लगायतले फुटाएका छन् ।
यहींनेर आउँछ परिवार र आफ्नै क्याबिनेटका मान्छेलाई पनि सम्हाल्न नसक्ने नेतृत्वको असक्षमता । यसो हेर्दा त यो सबै के देखिन्छ भने धेरै नेताहरुलाई जनता, कार्यकर्ता भन्दा नेतै भएर भएपनि समय गुजारौं कि भन्ने लाग्छ । धेरै नेता हुंदा सरकर निर्माणदेखि लिएर अनेक नेतृत्व गर्ने विषयमा विवाद छ झन् जन्मिंदै छन् । बरु चिन्ता त ठुला पार्टीहरुलाई पनि भएको होला । किनभने सत्ता समीकरण मिलाउने बेलामा अनेक पद दिन्छु भनेर नेताहरुलाई तानातान गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी गर्ने होला भनेर ।
फोरमको नयाँ टुक्राले "मधेस क्रान्ति फोरम" नामक पार्टी गठन गरेको बताएको छ । क्रान्ति त नाम मात्रै पो हो कि । कति क्रान्ति गर्नु यो देशमा । यसअघिका इतिहास हेर्ने हो भने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमलाई विजय गच्छदारले विभाजन गरेका थिए भने अमर यादव, किशोर विश्वासले पनि पार्टी फुटाएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसैले पार्टी फुटाएर जति नाक फुलाउने नेताहरु छन् तिनले अब मुख लुकाएर हिंडे हुन्छ । किनभने त्यसले समस्या मात्रै ल्याएको छ । समाधान त केवल सत्ता समीकरणको बेलामा अर्को पक्षलाई धोका दिएर निस्केको छ । त्यो पनि आफ्नै जनतालाई धोका दिएर । एकता भएजस्तो फुटेर हुन्न भन्ने कुरा त सामान्य नियम हो नि, के गर्ने भ्रमै ठुला भएपछि ।
त्यसैले अब ठुला भनिने पार्टीहरुले पनि नेता बन्न धेरै इच्छा गर्नेहरुलाई फुटबाट जोगाउन जरुरी छ । होइन भने सरकार बनाउंदा आफैंलाई संकट पर्ला नि । आफैंलाई संकट पर्ने भवितव्य आउंदा त चनाखो भएकै राम्रो है नेताज्यूहरु । - महेन्द्र ।
केही होला कि भन्यो, फेरि केही हुने
दुइ सय बढी विवाद दुइपटक म्याद थपिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले समाधान गर्ने संकेत देखिएको थियो । अर्थात करीब डेढ सय विवाद मिलिसकेका थिए । तर के गर्ने ती विवाद समाधान गर्न छाडेर दलहरुले अर्कैतिर ध्यान तान्न व्यस्त हुने छाँट देखाएका छन् । अझ सीधा रुपमा भन्नुपर्दा सरकारकै लागि मरिहत्ते गर्ने सोचमा पो फसेजस्तो छ दलहरु ।
होइन भने उतिबेला समाधान नहुने भयो भनेर संविधानसभाका विवाद समाधान गर्न भन्दै कार्यदल बनाउने तर अहिले आएर त्यही कार्यदल ठीक भएन भनेर निष्कर्षमा पुग्नु कति हदसम्म ठीक होला र । कार्यदल गठन भएको अहिले विरोध गर्नेले त उहिले पनि विरोध गरेकै थिए नि । तर अहिले आएर के भयो कुन्नि । कि संविधान बन्ने भयो भन्ने डरले यसो गरिएको हो, व्यंग्य गर्नेले त यसरी पनि गरेका छन् । कस्तो अचम्म, संविधानसभाका दलहरुलाई संविधान बन्ने डर रे ।
संविधानसभामा रहेका २७ दलको वैठकले संविधानसभाका औपचारिक संयन्त्रहरु सक्रिय बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वास्तवमा सैद्धान्तिक रुपमा यो कुरा निकै राम्रो हो । तर अब पार्टीका छोटे नेताहरुले पार्टीको अडान भन्दै समितिका बैठकहरुमा अनावश्यक बखेडा झिके भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने अरु देशमा चार वर्षमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाइएको छ भने नेपालम किन नहुने भन्ने मानसिकता नेताहरुमा छ ।
होइन भने सरासर काम गरिरहेको समितिलाई किन अलपत्र बनाउने षडयन्त्र भयो । विरोध भयो रे, विरोध भएका कुरा त धेरै छन् नि, तिनलाई पहिले समाधान गरे हुन्थ्यो नि । गर्नुपर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने काम गरेको आरोप पो लाग्न थालेको छ दलहरुलाई अहिले । के गर्नु र, आरोप र प्रत्यारोप न धेरै रहेछ राजनीति समाज । भन्न त भनिएको छ, संविधानका विवादित बिषयमा सहमति जुटाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदललाई आवश्यकता अनुसार सक्रिय तुल्याउन सकिने भनेर तर कसरी ? थाहै छैन ।
अब कुनै बेला राजनीतिक कार्यदलको गठनमै गौरव जमाउने दलहरुले एकाएक यस्तो निर्णय गर्नु कुनै इशारामा भएको भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ । एउटा सरकार बनाउन त यत्रो समय लगाउने दलहरुले संविधान बनाउनेजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कसरी यति छिटै निर्णयमा पुग्न सफल भए होलान्, बुझ्न निकै गाह्रो छ । कम्तीमा इशारामा भएको होइन भनेर पुष्टि गर्नका लागि पनि दलहरुले संविधानसभा मार्फत नै छिटो काम गरेर देखाउनु जरुरी छ । - महेन्द्र ।
एमालेको बानी सुध्रीएन
ब्यारेक बनाउन निकै सजिलो छ
ध्वंश गर्न निकै सजिलो छ । जहाँसुकैको जुन इतिहास हेरेपनि त्यही देखिन्छ । व्यत्तिगत रुपमा कसैले अनुभव गरेपनि थाहा हुन्छ कि, बनाउन जे पनि गाह्रो छ । एकीकृत माओवादीका नेताहरुले भन्लान् विचारका दृष्टिले नेपाली जनतालाई निकै अगाडि लगिसकेका छन् । तर त्यो विचारको परिणाम के त खै ? परिणाम त आउनुपर्‍यो नि । चियापसलमा गफ गरेर बस्नु मात्रै परिणाम हो भने त्यो कुरा अर्कै ।
प्रसंग हो, अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनको । सम्मेलनको क्रममा प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुलाई सैनिक व्यारेकमा परिवर्तन गरी उपलब्धि रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको जिकिर गरेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका जहाँसुकै नै उपलब्धि रक्षा गर्न कस्को इच्छा हुन्न र । यस क्रममा प्रचण्डको इच्छा पनि गलत होइन ।
तर इच्छाको प्रक्रिया पनि गलत हुन्छ । अहिलेको युगमा देशको कार्यकारी अधिकार हातमा रगत लिएर जानु र सबै नागरिकहरुको तालीका बीच जानुमा आकाश पातालको फरक छ । यस्तै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई ब्यारेकमा परिणतमा गरेर उपलब्धि रक्षा गर्नु र दिमाग लगाएर रक्षा गर्नुमा धेरै फरक छ । होइन भने ग्रीक सभ्यताको विकास हुनु किन पथ्र्यो । भौतिकवादी संसारको खुबै व्याख्या गर्ने माओवादीले अहिलेसम्मका वैज्ञानिक उपलब्धिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिएको हो भन्नेबारे याद राख्नु जरुरी छ ।
ती उपलब्धि प्राप्त गर्न कति शताब्दी लाग्यो । कम्तीमा त्यसैको कपी गरेर भएपनि नेपालीहरुले कति वर्ष अगाडि विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर, विदेशीहरुसँग भीख मागीमागी बनाइएका विश्वविद्यालय र स्कुलहरुलाई ब्यारेक बनाएर के गर्नु नि । ब्यारेक उत्तर कोरियाले पनि बनाएको छ, इराकमा बनेकै हुन्, बर्मामा पनि बनेकै हुन् । अमेरिकामा पनि नबनेका कहाँ हुन् र । आखिर कस्को उदाहरण चोर्न खोजिएको हो, यस प्रसंगमा ।
हो, आफ्ना विद्यार्थीलाई आन्दोलनका लागि तताउनका लागि र सरकारमा जाने भर्‍याङ निर्माणका लागि पनि प्रचण्डले निकै ध्वंसात्मक र क्रान्तिकारी भनिने कुरा बोलेका होलान् । तर यसको परिणाम के हुने होला । प्रचण्डले केही दिनमा आफ्नै भनाइलाई लिएर माफी माग्नु बाहेक अरु विकल्प छैन । बन्दुकको नाल भन्दा ज्ञानको ज्योति उपयोगी हुन्छ भन्ने कस्ले सिकाउने खै प्रचण्डलाई । - महेन्द्र ।
घरभित्र विवाद भएपछि बाहिरको समीक्षा गलत
एमालेमा देशभित्रको भन्दा बाहिरको चिन्ता गर्नेजस्तो परिस्थिति भएपनि त्यो रहेनछ । हुन त एमालेका नेताहरु, जो सरकारमा पनि सामेल छन्, उनीहरुले अन्तरिम संविधान नै अलोकतान्त्रिक भएको भनेर भन्न थालिसकेका छन् । आफैले बनाएको अन्तरिम संविधानविरुद्ध बोलेर यी नेताहरुले गर्नुसम्मको बेइमानी गरे । हुन त उनीहरुले आफुले बोलेको कुरा निकै समयसापेक्ष छ भनेका होलान् ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा थाहै नपाइकन सोह्र पटक तटस्थ बस्ने अनि अहिले आएर संविधानलाई दोष दिने पानीमाथि ओभानो हुनुबाहेक केही पनि होइन । हो नि, सबैले देखेका छन् मुख्यतः एमाले नै निर्णायक बनेको थियो, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा, संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन नहुनुमा । यसलाई बिर्सन मिल्दैन । अब अहिले आएर संविधान र नीतिलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
एमालेभित्र कति विवाद छ भन्ने कुरा एउटा विवाद हेरे पुग्छ । एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा विवाद हुँदा दुई पक्षबीच झडप नै भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल्याबोटोरी हलमा संस्थापन पक्षले एकलौटी रुपमा ६ वटै ब्यूरोमा आफ्ना मान्छे चयन गरेपछि झडप भएको बताइएको छ । अरु त अरु विद्यार्थी संगठनलाई पनि स्वतन्त्र राख्न चाहन्नन् दलहरु ।
विद्यार्थीहरुका नाममा उनीहरुले देशको शिक्षा क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् भन्ने यसैबाट सबैभन्दा धेरै प्रष्ट भएको अर्थात भनौं भने देशैभरका क्याम्पसहरुमा राजनीतिक अखडा स्थापित गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक अखडा स्थापित गर्ने अनि पढाइ गोली मार । किनभने राजनीति गर्ने धेरैजसो नेताहरुलाई पढाइको मतलब छैन भन्ने त यसै जानिन्छ । उनीहरुलाई कसरी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने नै ठुलो चिन्ता छ ।
धन्य, सो घटना लगत्तै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । झडपछि अर्को पक्षले पनि ६ वटै ब्युरोमा छुट्टै मनोनयन गरेको छ । अब भातृ संगठनमा पनि माउ पार्टीमा जस्तो समानान्तर पो हुने भयो । यसले विभाजन बाहेक के ल्याउला र । बिचरा, विद्यार्थी नेताहरु भने जम्बो केन्द्रीय समितिको विवाद बाहिर ल्याइदिएको भन्दै मिडियालाई दोष दिन चाहन्छन् । भएको कुरा बाहिर त ल्याउनैपर्‍यो नि । - महेन्द्र ।
December 05, 2010 6:34 am
समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार अनि सबै खालको माहोल अनुसार नयाँ पुस्ताले जति पुरानो पुस्ताले नयाँ माग र सोचाइको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । तर यो कुरालाई उल्टाउने प्रयास भएको छ । खासगरी देशको व्यवस्थापिका संचालन र संविधान बनाउने कामलाई लिएर । अहिलेको संसदले काम गर्न नसकेको वा राम्रोसँग काम गर्न असफल भएको भन्दै पुराना सांसद नेताहरु एकजुट नै भएका छन् ।
उनीहरुले मञ्च नै बनाएका रहेछन् । पूर्व सांसद मञ्चले संविधान सभाका सभासदहरुको कामप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । पूर्व सांसद मञ्चले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नसकेको र संविधान निर्माणमा सभासदहरु गम्भीर नभएको भन्दै सभासदहरुको चर्को आलोचना गरेको छ । हो, अहिलेको समयमा शीर्ष नेताहरुदेखि लिएर सबै सांसद तथा सभासदहरुलाई सचेत बनाउनुपर्ने बेला हो, तर यो समुह किन यसरी आयो ?
सोचनीय छ, नागरिक समाज, स्वयं सभासद र पार्टीहरुमा आबद्ध लोकपि्रय व्यक्तिहरु संविधान निर्माण, राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुको सट्टा पुराना र आउडेटेड मानिसहरु आएर के को कोकोहोलो गर्न खोजेका हुन्, बुझिनसक्नु छ । यसै त चिन्ता संविधान निर्माणको विषय, झनै चिन्ता पो हुने हो कि भन्ने । किनभने खराब मानिसहरुले खराब नै गर्छन् । असल गर्नेवाला छैनन् उनीहरु ।
यहाँनेर खराब भनेर किन भनियो भने अघिल्लो संसदीय अभ्यासकै क्रममा संसदीय प्रक्रियालाई ठेस पुर्‍याउने र बेइज्जत हुने किसिमले अनेक क्रियाकलाप भए । सांसद किनबेचदेखि लिएर भ्रष्ट्राचारका अनेक रुप देखिए । यहिबेलादेखिको तीतो कुरा नयाँ संविधानमा प्रतिविम्वित हुने हो कि भन्ने आशंका छ । त्यसकारणले पनि पुरानो परम्परा ब्युँताउने कुरालाई खराब भन्दा अरु शब्दावली शायद उपयुक्त नहोला ।
माओवादीले संसदमा देखाएको व्यवहार संसदीय परम्परा विपरीत भएको ठहर मञ्चले गरेको छ । पूर्व सांसदहरुले संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेकोप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् । अब अहिलेको बेला भनेका नयाँ जनमत पाउने प्रतिनिधिहरुलाई सक्रिय बनाएर जाने बेला हो । पुराना ब्युँताएर पुरानै कुरा आउनेवाला छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता भनेको पुरानो कुरा भन्दा नयाँलाई नै जोड दिनु हो । हो, पुरानाबाट पनि सकारात्मक कुरा सिक्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय भेला नै गरेर उनीहरु सक्रिय हुने दाउ खेल्नु अनावश्यक छ । - महेन्द्र । कार्टुन, कान्तिपुरको साभार ।